UGoogle uphelisa ifomathi ye-APK ngo-Agasti ukwenza i-AAB | I-Androidsis
UGoogle uphelisa ifomathi ye-APK ngo-Agasti ukwenza indlela ye-AAB
UDaniPlay | 30/06/2021 22:53 | Ukusetyenziswa kwe-Android, Izaziso
Emva kweminyaka emininzi nathi, Ifomathi ye-APK iya kunyamalala kwiVenkile yokuDlala yenyanga ka-Agasti. uphando iphelisa ubomi bayo emva kokuba ixesha lobulumko lidlulile kwaye igqibe kwelokuba ibhengeze i-AAB (Android App Bundle), ifomathi entsha ngokuqinisekileyo enzima kakhulu ekuqaleni kwaye iya kuphelisa uninzi lobuqhetseba.
Abaphuhlisi abafuna ukuqhubeka nokusebenza kuya kufuneka balungelelanise ne-AAB, kuba oku basenenyanga ezimbini ngaphambili. Lixesha elilumkileyo, ngakumbi ukwazi ukuba ukudityaniswa okutsha kuya kutshintsha ngokubhekisele kumgangatho okuwo ngoku.
1 Ukuqonda okukhulu
2 I-AAB ilwa nobugebenga
3 Umsebenzi omncinci ofunekayo kuguquko
4 Utshintsho oluyimfuneko
UDom Elliot, umphathi weGoogle Play, kubhaliso olusemthethweni oluchazayo ukuba ukusukela ngenyanga ka-Agasti ukuthunyelwa kwezicelo ze-APK akuyi kwamkelwa. Oku kuyakunyanzela ukuba usebenzise i-AAB, ethi kwelinye icala ihlale kancinci kakhulu kunee-APK zendalo, into eya kuthi ikhuphe imemori yeefowuni.
Izicelo ze-Android App Bundle (AAB) kunciphisa ubungakanani nge-15%, ekuhambeni kwexesha kuya kuba mnandi kwabo bantu bahlala befaka iiapps ezahlukeneyo kwiifowuni zabo. Umsebenzisi uya kukhuphela kuphela into eyimfuneko, ekubeni ezinye izibonelelo zingenzima njengoko zisenzeka ukuza kuthi ga ngoku.
Umntu uya kuxhamla, kuba baya kusebenzisa iprosesa kunye nemizobo esetyenziswa sisixhobo esiselfowuni, ungaze uphinde ulayishe i-terminal. Inguqulelo iya kwenziwa ngokwezifiso, yonke into ukuba nje iyaqonda i-hardware, ke iyahluka kwifowuni engenamandla kangako ukuya kwenye enamandla amakhulu.
I-AAB ilwa nobugebenga
I-AAB (Android App Bundle) iya kulwa ngokuchasene nobugqwethaKunzima ukuba izicelo kunye nemidlalo zikhululeke xa zineendleko ezivela kumakhi. Kule nto, ifayile iya kusetyenziswa ngendlela encinci, ngaphandle kokutsalwa, ayizukuba lula ukuyiguqula.
Izicelo eziguqulweyo azinakufundwa nakweyiphi na ifowuni, ke nokuba sisixhobo esiqhekezwe asizukuxhaswa yi-smartphone nganye. I-algorithms iya kudlala kakhulu apha, yiyo loo nto ifomathi ye-AAB ibetha iVenkile yokudlala, konke emva kokwaziswa ngo-2018.
Abaphuhlisi banomsebenzi ongaphambili, ngakumbi ukuba ufuna ukuhlaziya kunye nokungenisa umsebenzi wakho kwakhona ukuze ufumaneke kwivenkile kaGoogle Play. I-AAB iya kufunwa apha, kodwa hayi ngaphandle kwivenkile, yiyo loo nto ifomathi ye-APK izakuqhubeka ukubonwa kwezinye izibuko.
Umsebenzi omncinci ofunekayo kuguquko
Google, ngeposi blog, ithi 'kwizicelo ezininzi, umsebenzi omncinci kakhulu uyafuneka ukwenza i-AAB endaweni ye-APK. Oku ikakhulu kukukhetha ukhetho olwahlukileyo ngexesha lokwakha kunye nokuvavanya oku njengesiqhelo. Isixhobo se-app yifomathi yomthombo ovulekileyo ehambelana nezixhobo ezikhulu zokwakha ezinjenge-Android Studio, iGradle, iBazel, iBuck, uMdali weCocos, umanyano, i-Unreal Injini kunye nezinye iinjini. I-Play Core Native and Play Core Java & Kotlin SDKs.
Iinkampani ezininzi sele zinenxalenye yezixhobo zazo ezithunyelwa ngaphandle kwi-AAB, phakathi kwazo ezinye zaziwa ngokuba yiAdobe, iGameloft, iDuolingo, iNetflix, iRedBus, iTwitter neRiafy. Phakathi kwazo, ezinye ezininzi ziya kuvela kuyo yonke inyanga kaJulayi, ngethemba lokuba kwinyanga ka-Agasti ubuncinci ngaphezulu kwe-60% iya kulungelelanisa.
Nje ukuba ukhuphele ifayile kwiVenkile yokudlala ifayile iya kuba yi-AAB endaweni ye-APK, ke musa ukulumka ukuba uqala ukuyibona kwakhona ngo-Agasti. Ngaphandle kokungabinawo umhla ochanekileyo, iya kuba kwiiveki zokuqala zenyanga leyo xa siqala ukuyibona loo fomathi.
UGoogle usebenze iminyaka ukubuyisela i-APK kwifomathi ye-AABSekuyiminyaka engaphezu kwemithathu yovavanyo, ukuvavanywa nokulungiswa. Lelinye inyathelo eliya phambili kubaphuhlisi, njengoko befuna ukubona umsebenzi wabo uvuzwa, njengoko abanye belahlekelwe yimali eninzi ngenxa yobuqhetseba.
Inkampani iye yafuna ukusasaza iindaba kwiintsuku emva kokuba ezokuqala zibonwe ziinkampani ezinkulu, kubandakanya ne-microblogging yenethiwekhi yoluntu iTwitter, kodwa ayisiyiyo kuphela. Abanye sele besebenza ekubeni bekwazi ukuguqula ukusuka kwifomathi ngokukhawuleza ukuba ifumaneke ngaphezulu nje kwenyanga.
Oku kuyakuvumela inkampani ukuba isebenze kwifomathi eya kuthi inike umtsi kumgangatho kwaye iya kuba luncedo kuwo onke amaqela, kubandakanya nayo. UGoogle ubona i-AAB njengokhetho olufanelekileyo kubo bonke abaphuhlisi, kubandakanya abantu abathile abanesicelo esinye okanye ezingaphezulu ezijingayo.
Ezinye izicelo zinokushiywa ngaphandle, konke kuxhomekeke ekubeni baya kuhlaziya ngaphakathi okanye hayi, kuya kuhlala kubonakala ukuba impendulo yokuqala evela kubaphuhlisi ngokubanzi injani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » UGoogle uphelisa ifomathi ye-APK ngo-Agasti ukwenza indlela ye-AAB
Iimidlalo ezi-6 eziphambili zeentombazana ze-Android
Olunye uhlobo olulungileyo kwiTinder ngo-2021